ရေဒီယိုစခန်း Transmitter | Studio Transmitter Link Factory | Fm ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်
FMUSER ADSTL အကောင်းဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ် စတူဒီယို အသံလွှင့်စက် လင့်ခ် စက်ပစ္စည်း ပက်ကေ့ချ် ရောင်းချရန်
ဈေးနှုန်း (USD) : 4800
စုစုပေါင်း (USD): 4800
ငွေပေးချေစနစ် - ပေးပဲလ်
FMUSER ADSTL အကြောင်း
FMUSER ADSTL အလုပ်လုပ်ပုံ
၂။ ကုန်ပစ္စည်း ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် FMUSER ADSTL
FMUSER ADSTLရေဒီယို စတူဒီယို အသံလွှင့်စက်လင့်ခ်၊ IP မှ စတူဒီယို အသံလွှင့်စက်လင့်ခ် သို့မဟုတ် စတူဒီယို အသံလွှင့်စက်လင့်ခ်ဟုလည်း လူသိများသော၊ သည် FMUSER မှ အကွာအဝေး (60 မိုင်ခန့်အထိ) အကွာအဝေး 37 ကီလိုမီတာအထိ (XNUMX မိုင်ခန့်) ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အသုံးပြုသော ပြီးပြည့်စုံသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်စတူဒီယိုနှင့် ရေဒီယိုအင်တင်နာတာဝါ။
ဤမြင့်မားသောပေါင်းစပ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခြင်းပက်ကေ့ချ်သည် ကျွမ်းကျင်ရေဒီယိုဌာနတစ်ခုမှလိုအပ်သော ထုတ်လွှင့်မှုချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သောစတူဒီယိုကို အကျုံးဝင်သည် စတူဒီယိုလင့်ခ်ပို့လွှတ်သည်။ နှင့် STL ရေဒီယိုလင့်ခ်လက်ခံသူ ပြီးပြည့်စုံသော ရှေ့ panel LCD မျက်နှာပြင် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ အလွန်ပေါ့ပါးသော သံမဏိစတီးလ် Yagi အင်တင်နာ မြင့်မားသောအမြတ်နှင့်အတူ 30m RF အင်တင်နာ feedline နှင့် ပြည့်စုံသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ၏ အကြီးစားနှင့် အလတ်စား အမျိုးအစားအားလုံး၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် STL (ထုတ်လွှင့်ရန်လင့်ခ်သို့ စတူဒီယို) နှင့် မတူဘဲ FMUSER ADSTL သည် ပိုမိုများပြားသည်။ စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင် အထူးသဖြင့် ဘတ်ဂျက်နည်းသောဝယ်သူများအတွက် (ဝယ်ယူမှုအတွက် ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် သက်သာသောဘတ်ဂျက်ဖြင့်သာ)။ ထို့အပြင် ၎င်း၏ ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် FMUSER ADSTL သည် စီးပွားရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိက ရေဒီယိုလိုင်းများစွာအတွက် ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။
2. FMUSER ADSTL ၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
သင်၏ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုချွေတာပါ။ - 4-way စတီရီယိုအထိ ခိုင်မာသော XLR အသံအချက်ပြမှုနှင့် တစ်လမ်းသွား ASI (SDI) ဗီဒီယိုအချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုတို့သည် သင့်ဘတ်ဂျက်ကို ထိရောက်ကောင်းမွန်စေပြီး အပိုကုန်ကျစရိတ်များကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်- အသံလွှင့်လင့်ခ်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် စျေးကြီးသော အသံလွှင့်အင်တင်နာတာဝါတိုင်များကို ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်စေ စတူဒီယိုအစုံလိုက်ဝယ်ယူခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ .
သင်၏ထုတ်လွှင့်မှုအလားအလာကို ရှာဖွေပါ။ - ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံနှင့် ကျွမ်းကျင်သော RF အဖွဲ့၏ကျေးဇူးကြောင့်၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သတ်မှတ်ထားသော ရေဒီယို (SDR) နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ (ကုဒ်နံပါတ်၊ ပြုပြင်မှု၊ ကုဒ်ဝှက်ခြင်းနှင့် သရုပ်ဖော်ခြင်း) ကို နောက်ဆုံးတွင် ပေါင်းစပ်ကာ အများပြည်သူအတွက် ပြီးပြည့်စုံပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူလင့်ခ်စနစ်အဖြစ် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ . FMUSER ADSTL ထွန်းကားလာခြင်းသည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန အော်ပရေတာများ၏ အမျိုးမျိုးသောလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ကူညီပေးပြီး စီးပွားဖြစ်အမျိုးအစား သို့မဟုတ် သီးသန့်အမျိုးအစားအလိုက် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ၏ အလားအလာကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေသည်။
သင့်လိုအပ်ချက်များကိုသာ ဖြည့်ဆည်းပါ။ - ဤမျှထူးခြားသောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်နိုင်မှုစွမ်းရည်ဖြင့် FMUSER ADSTL သည် စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူလင့်ခ်၏အနှောင့်အယှက်များကို အလွယ်တကူခွဲခြားသိရှိနိုင်ပြီး ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊၊ စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးကဲ့သို့သော ၎င်း၏အရောင်းရဆုံးအချက်များမှလွဲ၍ အခြားအရာများဖြစ်သည့် တည်ငြိမ်သောပေးပို့မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော၊ ကြိမ်နှုန်းသွက်လက်မှုနှင့် ခရီးဝေးထုတ်လွှင့်မှုကဲ့သို့သော အခြားအရာများသည် FMUSER ADSTL သည် ရောင်းချရန်အတွက် အကောင်းဆုံး စတူဒီယိုအသံလွှင့်စက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရေဒီယို အသံလွှင့်ကိရိယာများ စျေးကွက်ရှိ ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူမှု ကုန်ကျစရိတ်ကို တူညီစေသည်။
STL ကြိမ်နှုန်းများကို ရွေးချယ်နိုင်စေရန် ပြုလုပ်ပါ။ - အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ FMUSER ADSTL တွင် ရွေးချယ်နိုင်သော စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူ လင့်ခ်ကြိမ်နှုန်းများ (ရာနှင့်ချီသော MHz မှ အမြင့်ဆုံး 9GHz) ရှိသည်။ ထုတ်လွှင့်မှုလင့်ခ်အတွက် STL သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရစတူဒီယိုချိတ်ဆက်ရန် လိုင်စင်မဲ့စတူဒီယိုကို လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၏ RF ကျွမ်းကျင်သူများထံ သင်၏ STL ကြိမ်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုချိတ်ဆက်ကိရိယာမော်ဒယ်လိုအပ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ တင်ပြနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ တရားမဝင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ထုတ်လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဒေသတွင်း ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား စီမံအုပ်ချုပ်မှုမှ စီမံခန့်ခွဲသော အထူးကန့်သတ်ချက်များကြောင့် ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် အချိန်များ ဆုံးရှုံးမှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ရုပ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို အခမဲ့ ထောက်ပံ့ပေးသွားပါမည်။ .
3. အဘယ်ကြောင့် FMUSER ADSTL လိုအပ်သနည်း။
FMUSER ADSTL စတူဒီယို အသံလွှင့်စက် လင့်ခ်ကိရိယာကို သင် အောက်ပါအခြေအနေများတွင် ရှိနေပါက အကြံပြုပါသည်-
တတ်နိုင်သော စတူဒီယို အသံလွှင့်စက် လင့်ခ်ကိရိယာများနှင့် အသံလွှင့်ကိရိယာ ငှားရမ်းခပုံစံ အမျိုးမျိုးကို ထပ်ခါတလဲလဲ ဝယ်ယူခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အလွန်မြင့်မားသော ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန် သို့မဟုတ် ရှောင်ရှားရန် လိုအပ်သည်
HD-SDI အသံနှင့် ဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများအတွက် 60km အထိ ထိရောက်သော ဂီယာအကွာအဝေးတစ်ခု သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်မှုချိတ်ဆက်ကိရိယာများကို ရောင်းချရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ဒစ်ဂျစ်တယ်စတူဒီယိုတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
ထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်း အသံနှင့် ဗီဒီယိုအချက်ပြများ၏ ဆုံးရှုံးမှုမရှိသော အရည်အသွေးကို သေချာစေရန် လိုအပ်သည် - ဆုံးရှုံးမှုမရှိခြင်းသည် အမြဲတမ်း ပိုကောင်းသည်။
သင်သည် အရည်အသွေး-အပြိုင်အဆိုင်နှင့် တတ်နိုင်သော ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်လင့်ခ်ကို ရှာဖွေနေသော်လည်း ဝယ်ယူသည့်စျေးနှုန်းကို သတိမထားမိဘဲ၊ နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံလွှင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် ကွန်ရက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၏လိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် ပြီးပြည့်စုံသောစနစ်တစ်ခု လိုအပ်သော်လည်း ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး စတူဒီယို အသံလွှင့်စက် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ ပေးသွင်းသူ။
အမျိုးမျိုးသော အသံလွှင့်ဌာနများ (ဥပမာ၊ ပြည်နယ် FM & TV အသံလွှင့်ဌာနများ စသည်) အတွက် အဝေးမှ (အသံလွှင့်စတူဒီယိုများ) ထုတ်လွှင့်ရန် မြင့်မားသောသစ္စာရှိ HD-SDI အသံနှင့် ဗီဒီယိုကို လိုအပ်ပါသည်။
စတူဒီယိုနှင့် အသံလွှင့်တာဝါကြားရှိ ကျယ်ပြန့်သောမြင်ကွင်းကဲ့သို့သော ပြိုင်ဖက်အများစုမပြုလုပ်နိုင်သော ပြိုင်ဖက်အများစုတွင် သင့်တွင်ကြိုတင်လိုအပ်ချက်များရှိသည်။
4. FMUSER ADSTL မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
1) STL အင်တင်နာအဖြစ် Yagi Antenna
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ STL အင်တင်နာသည် ဒေါင်လိုက်နှင့် အလျားလိုက် ပိုလာဇေးရှင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်စနစ်ရှိ Yagi အင်တင်နာဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော Yagi အင်တင်နာသည် အများအားဖြင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော ရေဒီယိုအသုံးပြုရလွယ်ကူမှု၊ မြင့်မားစွာရရှိမှု၊ ပေါ့ပါးမှု၊ အရည်အသွေးမြင့်မားမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုနှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှု စသည့်လက္ခဏာများရှိသည်။
transmitter link package အတွက် စျေးနှုန်းသက်သာသော စတူဒီယိုတွင်၊ Yagi အင်တင်နာနှစ်ခုကို STL အင်တာနာများအဖြစ် ထည့်သွင်းထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို စတူဒီယို၏ အသံလွှင့်အင်တင်နာမျှော်စင်နှင့် ထုတ်လွှင့်မှုမျှော်စင်ပေါ်တွင် အသီးသီး တပ်ဆင်မည်ဖြစ်ပြီး STL ရေဒီယိုလင့်ခ်ထုတ်လွှင့်မှု (အသံလွှင့်စတူဒီယို) နှင့် ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ နှင့် STL ရေဒီယိုလင့်ခ်လက်ခံသူ (ထုတ်လွှင့်မှုမျှော်စင်)။
ဤအတောအတွင်း၊ အရှည် 30 မီတာရှည်သော RF အင်တင်နာ feedlines နှစ်ခုကို STL transmitter နှင့် STL receiver တို့သည် စတူဒီယိုမျှော်စင်ပေါ်တွင် အသီးသီး ချိတ်ဆက်ထားပြီး HD-SDI အသံနှင့် ဗီဒီယို၏ အသံနှင့် ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှု လင့်ခ်စနစ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
2) STL Transmitter နှင့် STL လက်ခံသူ
စတူဒီယိုသည် မှတ်တမ်းတင်ထားသော အသံနှင့် ဗီဒီယိုကို STL transmitter နှင့် Yagi STL ရေဒီယိုလင့်ခ်အင်တင်နာမှတဆင့် ထုတ်လွှင့်ပြီး ရေဒီယိုအင်ဂျင်နီယာခန်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းမျှော်စင်အနီး STL transmitter နှင့် STL အင်တင်နာမှ လက်ခံရရှိပါသည်။
3) Studio Tower နှင့် Transmitting Tower
ရေဒီယိုစတူဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုလင့်ခ်တစ်ခုတွင်၊ STL ထုတ်လွှင့်သည့်ကိရိယာသည် စတူဒီယိုအဆုံးတွင် အသံနှင့်ဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများကို ရယူမည်ဖြစ်ပြီး စတူဒီယိုအနီးရှိ အသံလွှင့်အင်တင်နာမှတစ်ဆင့် ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး 60 ~ 100MHz (1000km အထိ) ဖြင့် အလွန်ရှည်လျားသောအကွာအဝေး (XNUMXkm အထိ) လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် Yagi အင်တင်နာ)။ ထို့နောက် transmitting tower (Yagi အင်တင်နာ) တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် အသံလွှင့်အင်တင်နာသည် စတူဒီယိုလမ်းညွှန်မှ အသံနှင့် ဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ဤသစ္စာရှိမှု မြင့်မားသော အသံနှင့် ဗီဒီယို အချက်ပြမှုများကို ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်နှင့် ပံ့ပိုးပေးသော ထုတ်လွှင့်မှု အင်တင်နာတို့မှ သင့်ဖောက်သည်များထံ ဖြာထွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤဒစ်ဂျစ်တယ်စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုလင့်ခ်သည် ညွှန်ပြသည့်အသံနှင့် ဗီဒီယိုအချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအချက်ပြမှုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အချက်ပြဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းသည် အလွန်သက်သာသောကုန်ကျစရိတ်နှင့် အလွန်ရှည်သောအချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေး၏ ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
5. FMUSER ADSTL ၏ ဘုံမီးမောင်းထိုးပြမှုများ
ထိုသို့သောဘတ်ဂျက်စျေးနှုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ၎င်း၏ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုလင့်ခ်နှင့် analog စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုလင့်ခ်၏တူညီသောအဆင့်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါသေးသည်။
ထုတ်လွှင့်မှုလင့်ခ်အတွက် ပေါင်းစပ်စတူဒီယိုတစ်ခုအနေဖြင့် FMUSER ADSTL သည် 4-channel ပေါင်းစပ် XLR စတီရီယိုအသံအချက်ပြမှုများနှင့် 1-channel ASI (SDI) ဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများကို တစ်ပြိုင်နက် ထုတ်လွှင့်နိုင်ပြီး၊ သင့်ကုန်ကျစရိတ်ကို ထိရောက်စွာသက်သာစေနိုင်သည်။ FMUSER ADSTL ကို သင်ရွေးချယ်ပါက၊ အစုံလိုက်များစွာရှိသော STL transmitter လင့်ခ်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူရန် မလိုအပ်ဘဲ ရေဒီယိုအင်တင်နာတာဝါတိုင်၏ ငှားရမ်းခကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေနိုင်သည်။
60 ကီလိုမီတာအထိ အသံနှင့် ဗီဒီယို ထုတ်လွှင့်နိုင်စွမ်းအပြင် FMUSER ADSTL တွင် ထူးထူးခြားခြား ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်း၊ စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူ လင့်ခ်ကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ချန်နယ်လှိုင်းနှုန်းကို သိမ်းပိုက်နိုင်သည်။
လွယ်ကူသော ကုဒ်ဝှက်ခြင်း၏ အင်္ဂါရပ်မှာ FMUSER ADSTL စတူဒီယို အသံလွှင့်စက်လင့်ခ်များသည် ဂီယာလုံခြုံရေးနှင့် အချက်ပြလျှို့ဝှက်မှု ပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ သင်၏ဂရုတစိုက်ထုတ်လုပ်ထားသော အော်ဒီယိုနှင့် ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ်များ ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်း၍ လက်ခံရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း 99.99% စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံနှင့် လက်ရာမြောက်သော ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုအခါ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ transmitter လင့်ခ်ကိရိယာများ ပေးသွင်းရန် အကောင်းဆုံး စတူဒီယိုဖြစ်လာပါပြီ၊ ရောင်းချရန်အတွက် FMUSER စတူဒီယို အသံလွှင့်စက် လင့်ခ်ကိရိယာများအားလုံးသည် ထုထည်နှင့် အရည်အသွေးတွင် သေးငယ်လာသည့်အတွက်ကြောင့် ပေါင်းစည်းရန် ပိုမိုလွယ်ကူလာပါသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော အသံလွှင့်စနစ်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူ RF အဖွဲ့သည် အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုရရှိရန်အတွက် အချက်ပြသိမ်းဆည်းခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် လဲလှယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရိုးရှင်းစေရန်လည်း ကူညီပေးပါမည်။
5) ပြိုင်ဘက်ကင်းသော အသံအတွေ့အကြုံ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် DSP ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ 100% အသံအရည်အသွေး ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း။
စနစ်ကိုဖွင့်လိုက်ရုံဖြင့် စတူဒီယိုအသံလွှင့်စက်လင့်ခ်သည် သင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် 24/7 အဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်နေမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုသည် တောင်းဆိုထားသည်မှလွဲ၍ ၎င်းသည် အမြဲတမ်းကဲ့သို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး သင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် တိကျသေချာသောအသံနှင့် ဗီဒီယိုကို အဆက်မပြတ်ထုတ်လွှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
FMUSER ADSTL စတူဒီယိုတွင် အသံလွှင့်လင့်ခ်သို့ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် မိုးကြိုးကာကွယ်ရေးစနစ် ရှိသည်။ မြေစိုက်ကြိုးကို ချိတ်ဆက်ပြီး ကျန်ကို အကာအကွယ်စနစ်သို့ ချန်ထားရန်သာ လိုအပ်သည်။ STL ရေဒီယိုလင့်ခ်အင်တင်နာ၊ အသံလိုင်း သို့မဟုတ် ပါဝါစနစ်မှ လျှပ်စီးကြောင်းများ ဝင်လာနေပါစေ STL ရေဒီယိုလင့်ခ်ကိရိယာသည် ပြီးပြည့်စုံစွာ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
ရောင်းရန်အကောင်းဆုံးရေဒီယိုစတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူလင့်ခ်ကိုမရွေးချယ်မီ တရားဝင်ထုတ်လွှင့်သည့်အကြိမ်ရေအကွာအဝေး သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားသော STL ရေဒီယိုလင့်ခ်ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းစသည်တို့အကြောင်း ဒေသတွင်းရေဒီယိုနှင့် တီဗွီစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များနှင့် တိုင်ပင်ရန် အမြဲသတိရပါ။
ရွေးချယ်နိုင်သော STL စနစ် ကြိမ်နှုန်းများ - ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း လည်ပတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သင့်ဖောက်သည်များအတွက် ဆိုးရွားသောအချက်များ ရှောင်ရှားနိုင်ရန် (ဥပမာ FCC အပိုင်း 15 မှ ဖန်တီးထားသော တရားမဝင် အသံလွှင့်စတူဒီယို ထုတ်လွှင့်မှု လင့်ခ်ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား သို့မဟုတ် အချို့သော ဒေသန္တရ ရေဒီယိုနှင့် တီဗီ စီမံခန့်ခွဲရေးအချို့)၊ အထူးဝန်ဆောင်မှုများ လိုအပ်ပါက၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ လှိုင်းနှုန်းစဉ်များကို စတူဒီယိုအတွက် 7GHz-9GHz လှိုင်းနှုန်းလှိုင်း သို့မဟုတ် 100MHz-1000MHz (FMUSER) တွင် ပစ္စည်းများကို ချိတ်ဆက်ထုတ်လွှင့်နိုင်ရန် စတူဒီယိုအတွက် (FMUSER သည် ရွေးချယ်နိုင်သော STL လှိုင်းနှုန်းစဉ်အမျိုးမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မတူညီသော STL ကိရိယာအစုံအလင်ကို ပံ့ပိုးပေးထားကြောင်း သတိပြုပါ)၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ RF ကျွမ်းကျင်သူထံ ဆက်သွယ်ပါ။
အသံလွှင့်ခြင်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ဖြေရှင်းချက် - FMUSER ADSTL သည် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အရ ပြိုင်ဆိုင်မှုမြင့်မားသည်။ အသုံးများသော စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းလင့်ခ်များကို အခြေခံအားဖြင့် analog နှင့် digital radio station studio transmitter link အမျိုးအစားများအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသော်လည်း FMUSER ADSTL သည် စျေးအသက်သာဆုံး စတူဒီယို transmitter link ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
အများကြီးတတ်နိုင်ပါတယ်။ - စက်ပစ္စည်းအသုံးစရိတ်အတွက် လုံလောက်သောဘတ်ဂျက်မရှိသောအခါ၊ ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာသာကုန်ကျသည့် ဤတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းရှိသော ရေဒီယိုစတူဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းလင့်ခ်ပက်ကေ့ခ်ျသည် သင့်လိုအပ်ချက်များကို အလွယ်တကူဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံမတူညီသောစျေးနှုန်းများကြောင့် ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် များစွာကွာခြားမည်ကို သင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ - အနိမ့်ဆုံးဘတ်ဂျက်ရှိသော STL ပက်ကေ့ချ်သည်ပင် သင့်အား ကောင်းမွန်စွာဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သင်လိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံး STL စက်ကိရိယာမော်ဒယ်များထဲမှ တစ်ခုကို မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူပေးပါ။
Freq Band7-9GHz အမြန်နှုန်း
ထုတ်လွှင့်မှုအပိုင်း 60 ကီလိုမီတာအထိ
operating ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး ၂၄၀၀ - ၂၄၈၃ MHz
ကြိမ်နှုန်းအဆင့်တန်ဖိုး 10,000 Hz
ကြိမ်နှုန်းသွေဖည် ± 10,000 Hz
RF ပို့လွှတ်ပါဝါ 10 ဒဗလျူ
RF ပို့လွှတ်ခြင်း ပါဝါသွေဖည်ခြင်း။ 0.1% ±
ကြိုးဝိုင်းအတွင်း အကြွင်းအကျန်ဓါတ် ＜- 80 dB
ဟာမိုနီရောင်ခြည်မြင့်သည်။ ＜- 70 dB
Parasitic AM ဆူညံသံ ＜- 60 dB
အသံပိုင်းဆိုင်ရာ မုဒ် 32 QAM@1M
ဗီဒီယို မော်ဂျူးမုဒ် 15 bit/s@5M
sensitivity ကိုလက်ခံခြင်း - 78 dBm
RF output ကို impedance 50 အုမ်း
RF output interface ကို N-head (အခြားအင်တာဖေ့စ်များကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်)
2) ANALOG AUDIO ထည့်သွင်းခြင်း။
output interface ကို XLR
သွင်းအားစု impedance 600 အုမ်း
3) Digital Audio Input (AES/EBU လည်ပတ်မှု)
သွင်းအားစု impedance 110 အုမ်း
ဆူညံသံအချိုးမှအချက်ပြ > 85 dB (1,000 Hz၊0dBm)
ပုံပျက် <0.05% (30 Hz - 15,000 Hz၊0dBm)
အသံကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု ±0.1 dB (30 Hz - 15,000 Hz၊0dBm)
စတီရီယိုခွဲခြာ > 80 dB (30 Hz - 15,000 Hz၊0dBm)
input signal ကို ASI HD ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြ
output interface ကို BNC
မဲ > 45 dB
4) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနှင့် Spec
အရွယ်အစား (Transmitter) (W) 440 mm × (H) 88 mm × (D) 450 mm
ဆာဗာကိုယ်ထည် (Transmitter) 19 လက်မ 2U rackmount ကိုယ်ထည်
အလေးချိန် (Transmitter) 13 ကီလိုဂရမ်
အရွယ်အစား (လက်ခံသူ) (W) 440 mm × (H) 44 mm × (D) 300 mm
ဆာဗာ ကိုယ်ထည် (Receiver) 19 လက်မ 1U rackmount ကိုယ်ထည်
အလေးချိန် (လက်ခံသူ)4ကီလိုဂရမ်
အပူ dissipation mode ကို လေအေးပေးစက် (အတင်းအကျပ်)
ပရိတ်သတ်ဆူညံသံ <50 dB
5) အကြံပြုထားသော အလုပ်ချိန်သတ်မှတ်ချက်
အမြင့် ＜4,500 မီတာ
ပါဝါထောက်ပံ့ရေးဗို့ 90 VAC - 260 VAC / 47 Hz - 63 Hz
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် operating -10 ℃ - +45 ℃
ပါဝါစားသုံးမှု 50 ဒဗလျူ
သက်ဆိုင်ရာစျေးနှုန်းနှင့် အင်တာဖေ့စ်ကဲ့သို့သော ADSTL စက်ပစ္စည်းပက်ကေ့ချ်၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအချက်အလက်အချို့သည် မတူညီသောစက်ပစ္စည်းမော်ဒယ်များအလိုက် ကွဲပြားကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သိပါ။ အထက်ဖော်ပြပါ စက်ပစ္စည်းပုံများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။
1. FMUSER ADSTL ပက်ကေ့ချ်တွင် ဘာပါလဲ။
ADSTL STL လင့်ခ်ထုတ်လွှင့်သူ * ၁
ADSTL STL လင့်ခ်လက်ခံသူ * ၁
ADSTL Yagi STL လင့်ခ်အင်တင်နာ * 2
ကုန်ပစ္စည်းလက်စွဲ * ၁
2. သင့်ဘတ်ဂျက်အတွက် အခြားရရှိနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများ
FMUSER သည် လုံးဝအသုံးပြုနိုင်သော မတူညီသော STL စက်ပစ္စည်းပက်ကေ့ချ် ဆယ်ဂဏန်းကိုလည်း ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ သင်၏ဘတ်ဂျက်များကိုပြည့်မီပါ။! တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်
မော်ဒယ်အမှတ် ကိုယ်ထည် frequency ထုတ်လွှင့် / လက်ခံ စျေးနှုန်း
ADSTL-M11 2U+1U ၂၄၀၀ - ၂၄၈၃ MHz TX- 1 x L/R သို့မဟုတ် AES/EBU in, 1 x ASI SDI VIDEO in 4800 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
RX- 1 x L/R သို့မဟုတ် AES/EBU ထွက်သည်၊ 1 x ASI SDI VIDEO ထွက်လာသည်။
ADSTL-M12 2U+1U ၂၄၀၀ - ၂၄၈၃ MHz TX-2x L/R သို့မဟုတ် AES/EBU in, 1 x ASI SDI VIDEO in 5000 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
RX-2x L/R သို့မဟုတ် AES/EBU ထွက်သည်၊ 1 x ASI SDI VIDEO ထွက်လာသည်။
ADSTL-M13 2U+1U ၂၄၀၀ - ၂၄၈၃ MHz TX-3x L/R သို့မဟုတ် AES/EBU in, 1 x ASI SDI VIDEO in 5200 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
RX-3x L/R သို့မဟုတ် AES/EBU ထွက်သည်၊ 1 x ASI SDI VIDEO ထွက်လာသည်။
ADSTL-M14 2U+1U ၂၄၀၀ - ၂၄၈၃ MHz TX-4x L/R သို့မဟုတ် AES/EBU in, 1 x ASI SDI VIDEO in 5400 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
RX-4x L/R သို့မဟုတ် AES/EBU ထွက်သည်၊ 1 x ASI SDI VIDEO ထွက်လာသည်။
ADSTL-G11 2U+1U7-9GHz အမြန်နှုန်း TX- 1 x L/R သို့မဟုတ် AES/EBU in, 1 x ASI SDI VIDEO in 12800 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ADSTL-G12 2U+1U7-9GHz အမြန်နှုန်း TX-2x L/R သို့မဟုတ် AES/EBU in, 1 x ASI SDI VIDEO in 13000 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ADSTL-G13 2U+1U7-9GHz အမြန်နှုန်း TX-3x L/R သို့မဟုတ် AES/EBU in, 1 x ASI SDI VIDEO in 13200 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ADSTL-G14 2U+1U7-9GHz အမြန်နှုန်း TX-4x L/R သို့မဟုတ် AES/EBU in, 1 x ASI SDI VIDEO in 13400 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
အကယ်၍ သင်သည် STL လင့်ခ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပက်ကေ့ဂျ် ပေါင်းစပ်မှုများကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားပါက - အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများနှင့် ထိပ်တန်းအရည်အသွေးဖြင့်၊ ထို့နောက်တွင် မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ! WE အမြဲတမ်းနားထောင်နေတယ်!
1. မေး- ငါ့နိုင်ငံမှာ ထုတ်လွှင့်တဲ့ လင့်ခ်စနစ်ကို အသုံးပြုဖို့ စတူဒီယိုကို အသုံးပြုတာက တရားဝင်လား။
စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူလင့်ခ်သည် နိုင်ငံအများစုတွင် တရားဝင်သည်။ သို့သော် အချို့သောနိုင်ငံများတွင် သုံးစွဲကြသည်။ studio transmitter link ပေးရတယ်။ ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှ ကန့်သတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်၊ မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို တင်ပြရန် တောင်းဆိုမည်ဖြစ်ပြီး၊ မဟုတ်ပါက တရားမ၀င်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် ဒဏ်ကြေးငွေ ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ ပရမ်းပတာများမှ ရုန်းထွက်ရန် အချိန်အနည်းငယ်ကြာမည်ဖြစ်ကာ ထို့ကြောင့် FMUSER မှ ဒေသခံရေဒီယို သို့မဟုတ် တီဗီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ တရားဝင်ထုတ်လွှင့်သည့် ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုလျှောက်ထားရန် အကြံပြုထားသောကြောင့် STL လင့်ခ်ကိရိယာကို ဝယ်ယူပါက တရားဝင်ထုတ်လွှင့်နိုင်စေရန်အတွက် အထူးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံအများစုတွင်၊ သင်ဆန္ဒရှိအတိုင်း ရေဒီယိုစတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူလင့်ခ်ကို အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားပြီး လိုင်စင်နှင့် အပိုအခကြေးငွေများ မလိုအပ်ပါ။
2. မေး- ကျွန်တော် ဖိလစ်ပိုင်မှာ ရှိနေချိန်မှာ စတူဒီယို အသံလွှင့်စက် လင့်ခ် IP ရေဒီယို ADSTL ကို FMUSER မှ ဝယ်လို့ရပါသလား။
A: အဲဒါ သေချာတယ်။
FMUSER သည် ကျွမ်းကျင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှု Transmitter လင့်ခ်ကိရိယာများအတွက် တတ်နိုင်သော စတူဒီယိုမှဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖိလစ်ပိုင်ဖောက်သည်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရသည့်အတွက် ကျေနပ်ပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် STL ရေဒီယိုလင့်ခ်မှ Analog STL လင့်ခ်အထိ တိကျသောအပလီကေးရှင်းများတွင်ကွဲပြားသည့် FMUSER မှ စတူဒီယိုအသံလွှင့်စက်လင့်ခ်ကိရိယာအမျိုးအစားအားလုံးကို သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီး စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူလင့်ခ်စျေးနှုန်းအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူလင့်ခ်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူပါသလား။ စကားပြောရအောင်။
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးပေးသော နိုင်ငံများ၏ စာရင်းဖြစ်ပြီး သင်ထံမှ ပစ္စည်းများကို ချိတ်ဆက်ထုတ်လွှင့်ရန် စတူဒီယိုတစ်ခုကို ဝယ်ယူနိုင်သည်-
ချဒ်၊ ချီလီ၊ တရုတ်၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကော်မိုရော့စ်၊ ကွန်ဂို၊ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ၊ ကော်စတာရီကာ၊ ညီအစ်ကို အိုင်ဗရီကို့စ်၊ ခရိုအေးရှား၊ ကျူးဘား၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒိန်းမတ်၊ ဂျီဘူတီ၊ ဒိုမီနီကာ၊ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ၊ တီမောလက်စတီ (တီမောလက်စတီ)၊ အီကွေဒေါ၊ အီဂျစ်၊ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ၊ အီကွေတိုရီရယ်ဂီနီ၊ အီရစ်ထရီးယား၊ အက်စ်တိုးနီးယား၊ အက်စဝါတီနီ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဖီဂျီ၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂါဘွန်၊ ဂမ်ဘီယာ၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ ဂျာမနီ၊ ဂါနာ၊ ဂရိ၊ ဂရီနာဒါ၊ ဂွါတီမာလာ၊ ဂီနီ၊ ဂီနီဘစ်ဆော၊ ဂိုင်ယာနာ၊ ဟေတီဟွန်ဒူးရပ်စ်၊ ဟန်ဂေရီ၊ အိုက်စလန်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အီရန်၊ အီရတ်၊ အိုင်ယာလန်၊ အစ္စရေး၊ အီတလီ၊ ဂျမေကာ၊ ဂျပန်၊ ဂျော်ဒန်၊ ကာဇက်စတန်၊ ကင်ညာ၊ ကီရီဘာတီ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ကိုဆိုဗို၊ ကူဝိတ်၊ ကာဂျစ်စတန်၊ လာအို၊ လတ်ဗီးယား၊ လက်ဘနွန် လီဆိုသို၊ လိုက်ဘေးရီးယား၊ လစ်ဗျား Liechtenstein၊ Lithuania၊ Luxembourg၊ Madagascar၊ Malawi၊ Malaysia၊ Maldives၊ Mali၊ Malta၊ Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federated States of), Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, မိုဇမ်ဘစ်၊ မြန်မာ (မြန်မာ)၊ နမီးဘီးယား၊ နောရူ၊ နီပေါ၊ နယ်သာလန်၊ နယူးဇီလန်၊ နီကာ အဂွာ၊ နိုင်ဂျာ၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ မြောက်ပိုင်းမက်စီဒိုးနီးယား၊ နော်ဝေး၊ အိုမန်၊ ပါကစ္စတန်၊ ပါလော့၊ ပနားမား၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီ၊ ပါရာဂွေး၊ ပီရူး၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ကာတာ၊ ရိုမေးနီးယား၊ ရုရှား၊ ရဝမ်ဒါ၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်၊ စိန့်လူစီယာ၊ စိန့် Vincent and the Grenadines၊ Samoa၊ San Marino Sao Tome and Principi၊ Saudi Arabia၊ Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sultan, Sultan, တောင်ပိုင်း ဆူရီနမ်၊ Rui Dian၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဆီးရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ တွန်ဂါ၊ ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို၊ တူနီးရှား၊ တူနီးရှား၊ တူရကီ၊ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်၊ တူဗာလူ၊ ယူဂန်ဒါ၊ ယူကရိန်း၊ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု အီးမိုရိတ်များ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ဥရုဂွေး၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန် ဗာနူအာတူ၊ ဗာတီကန်စီးတီး၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ ဗီယက်နမ်၊ ယီမင်၊ ဇမ်ဘီယာ၊ ဇင်ဘာဘွေ။
စာရင်းသွင်းထားသောနိုင်ငံတစ်ခုမှမဟုတ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်၊ ဝယ်ယူမှုတစ်လျှောက်လုံးအကောင်းဆုံး STL လင့်ခ်စနစ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ အသေးစိတ်ခြေလှမ်းတိုင်းကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
3. မေး- ရုပ်သံထုတ်လွှင့်သူများသည် စတူဒီယိုအား အသံလွှင့်စက်နှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်ကြသနည်း။
A- သင့်တွင် ဦးစွာ စတူဒီယို အသံလွှင့်စက် လင့်ခ်တစ်ခု ရှိသင့်ပြီး FMUSER ကဲ့သို့သော ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဆက်သွယ်သင့်ပါသည်။
FMUSER ထံမှ ADSTL ကို ဝယ်ယူသည့် အသံလွှင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိကြောင်း ဆိုကြပါစို့ transmitter link ကို စတူဒီယိုက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။- စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူလင့်ခ်သည် အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်နှင့် တပြိုင်နက် စတူဒီယိုသည် အသံနှင့်ဗီဒီယိုကို STL link transmitter နှင့် Yagi antenna မှထုတ်လွှင့်သောအချက်ပြမှုများနှင့်အတူ စတူဒီယိုမှထုတ်လွှင့်သည့်အင်တင်နာမျှော်စင်သို့ အသံနှင့်ဗီဒီယိုကို ပေးပို့မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူလင့်ခ်လက်ခံသူမှ လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် Yagi။
4. မေး- ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စတူဒီယို အသံလွှင့်စက် လင့်ခ်စနစ်ကို ဘယ်ကနေ ချေးရမလဲ။
A- FMUSER သည် သင်၏ အကောင်းဆုံး ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်း ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။
မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် STL လင့်ခ်စနစ်သည် ရေဒီယိုစတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သည့်လင့်ခ်များကြားတွင် အလွန်စျေးကြီးသောကြောင့် ထုတ်လွှင့်သူအများအပြားသည် အသုံးပြုထားသော စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူလင့်ခ်ကို ငှားရမ်းရန် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသည်မှာ၊ FMUSER မှ စတူဒီယို အသံလွှင့်စက် လင့်ခ် ADSTL ကို ဝယ်ယူရန် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်-အမျိုးအစား STL လင့်ခ်စနစ် ငှားရမ်းခြင်းနှင့် တူညီသော ဈေးနှုန်းနီးပါး ရှိသည်။ ငှားရမ်းခ၏ လင့်ခ်စနစ်အတွက် အပိုစတူဒီယိုအတွက် ပေးချေရန်မလိုအပ်တော့ဘဲ၊ ADSTL ၏ နောက်ဆုံးထွက်နှုန်းထားကို တောင်းဆိုခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပုံရသည်။ ADSTL တွင် နောက်ထပ် spec များ လိုအပ်ပါက (ရုပ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်)၊ သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုချန်ထားပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ထံ အမြန်ဆုံး အကြောင်းပြန်ပါမည်။
5. မေး- transmitter link စျေးနှုန်းအတွက် စတူဒီယိုက ဘယ်လောက်လဲ။
A: စျေးနှုန်းများသည် အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်မူတည်၍ USD တစ်ထောင်မှ ဆယ်ဂဏန်းအထိ USD ထောင်ဂဏန်း သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုသောစျေးနှုန်းများရှိသည်။
စျေးနှုန်းများသည် စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူလင့်ခ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် စတူဒီယိုအမျိုးအစားများထံမှ အသံလွှင့်စက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများအထိ ကွဲပြားသည်။ သင့်တွင်ဘတ်ဂျက်အလုံအလောက်ရှိပါက Rohde & Schwarz မှဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ဈေးနှုန်းက $1.3W လောက်ရှိပါတယ်။ ဘတ်ဂျက်မလုံလောက်ဘဲ အရည်အသွေးမြင့် အသံနှင့် ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက် လိုအပ်နေသေးပါက၊ သင်ဝယ်ယူရန် စဉ်းစားနိုင်ပါသည်။ တတ်နိုင်သော စတူဒီယို အသံလွှင့်စက် လင့်ခ် FMUSER မှ ပြီးပြည့်စုံသောစနစ်အတွက် USD 3k-5k သာကျသင့်သည် (ဥပမာ၊ STL အသံလွှင့်စက်၊ STL လက်ခံကိရိယာ၊ အင်တင်နာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ)
6. မေး- မည်သည့်လိုင်စင်ရ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ကြိုးများကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသနည်း။
A- 40GHz အထက်ကို USA တွင် ခွင့်ပြုထားသည်။
FCC ၏ အဆိုအရ အစောပိုင်းနည်းပညာသည် အဆိုပါစနစ်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို 1 GHz အကွာအဝေးရှိ ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းအဖြစ် ကန့်သတ်ထားသည်။ Solid-state နည်းပညာ တိုးတက်မှုကြောင့် စီးပွားရေးစနစ်များသည် 90 GHz အကွာအဝေးအထိ ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိသည်။ ဤအပြောင်းအလဲများကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ကော်မရှင်သည် 40 GHz အထက် spectrum ကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုသည့်စည်းမျဉ်းများကိုချမှတ်ခဲ့သည်။
ဤ spectrum သည် အခြားအရာများကြားတွင် အသုံးပြုရန်၊ တိုတောင်းသောအကွာအဝေး၊ ပညာရေးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အပလီကေးရှင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် စွမ်းရည်မြင့် ကြိုးမဲ့စနစ်များ၊ စာကြည့်တိုက်များသို့ ကြိုးမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်၊ သို့မဟုတ် အခြားသော အချက်အလက်ဒေတာဘေ့စ်များကဲ့သို့သော ဖြစ်နိုင်ခြေအမျိုးမျိုးကို ပေးဆောင်ပါသည်။
သို့သော် နိုင်ငံတိုင်းသည် ဤသဘောတရားကို လိုက်နာကြသည်မဟုတ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတရားမ၀င်ထုတ်လွှင့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် သင့်နိုင်ငံရှိ လိုင်စင်ရ ရေဒီယိုလှိုင်းများကို စစ်ဆေးရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ FMSUER သည် ဒေသန္တရ ရေဒီယို စီမံအုပ်ချုပ်မှု၏ အထူးခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သင့်အား အကန့်အသတ်မရှိ ထုတ်လွှင့်နိုင်ရန် စတူဒီယိုအတွက် ကြိမ်နှုန်းမျိုးစုံကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ FMSUER မှ ပံ့ပိုးပေးသော လှိုင်းနှုန်းများမှာ 100MHz-1000MHz၊ 433-860MHz၊ 2.3-2.6g၊ 4.9-6.1g၊ 5.8G၊ 7g-9g ပါဝင်သည်။
သင့်လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီစေရန်အတွက် စျေးနှုန်းသက်သာသော စတူဒီယို အသံလွှင့်စက် လင့်ခ်ကိရိယာများကို မော်ဒယ်များနှင့် လှိုင်းနှုန်းစဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ RF ကျွမ်းကျင်သူများကို ဆက်သွယ်ပါ၊ ပိုမိုသိရှိရန် စတူဒီယိုအသံလွှင့်စက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် FMUSER မှ လှိုင်းနှုန်းစဉ်များကို စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအကြောင်း။
7. မေး- စတူဒီယို အသံလွှင့်စက် လင့်ခ်ကို လိုင်စင်ရ ရှိ၊ မရှိ ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ။
A- FMUSER ကဲ့သို့သော RF ကျွမ်းကျင်သူထံ လှည့်ပါ။ ကူညီဖို့ သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ ရေဒီယို စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
စတူဒီယိုအသံလွှင့်စက်လင့်ခ်ကိရိယာများကို အသုံးမပြုမီ သို့မဟုတ် ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီ၊ ရရှိနိုင်သော အရည်အချင်းလက်မှတ်များအတွက် လျှောက်ထားရန် သို့မဟုတ် လိုအပ်သလို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန် ဒေသတွင်း ရေဒီယိုနှင့် တီဗီအုပ်ချုပ်ရေးကို ဆက်သွယ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်သူ RF အဖွဲ့ STL လင့်ခ်စနစ်လိုင်စင်ရယူခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲကိစ္စရပ်များတွင် သင့်အား ကိုင်တွယ်ရာတွင် ကူညီပေးပါမည် - စက်ပစ္စည်းတပ်ဆင်ခြင်းမှ 100% ဘေးကင်းသောစနစ်လည်ပတ်မှုအထိ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး